Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha | November 2019
Sida loo abuuro iyo u koraan tricirtis beerta
Sumada sharafsan ee dibadda ee tricyrtis oo ah wakiil dhalaalaya ah ee adduunka ubax ee orchids beerta waxay kor u qaadaa walaac ku saabsan iska caabinta saameynta dibadda iyo cudurrada. Iyo haddii cabsida cabsida noocan oo kale ah maaha mid aan waxtar lahayn oo ku saabsan dhibaatooyinka la xiriira daryeelka iyo sii kordhaya, markaa caabbinta cudurada wanaagsan ee orchid beerta waa shaki badan.
Noocyada beerista ee echinacea: beerashada iyo daryeelidda for perennial
Maanta, Echinacea ayaa ku koray ujeedooyin qurxoon, iyo sida warshad caafimaad oo Yurub, Waqooyiga Ameerika, Caucasus iyo Ruushka. In daawada dhaqameed iyo dhaqameed, iyo isticmaal caleemaha geedka, iyo ubax, iyo xididdada. Koritaanka Echinacea iyada oo loo marayo geedo Ma jiraan dhibaatooyin gaar ah ee koritaanka Echinacea.
Salvia Dubravny, ama Salvia, waa geed qashin ah oo noqon kara geedka sanadlaha ah ama gaaban. Meelaha banaanbaxa ah waxaa badanaa laga helaa geedo daa'in ah. Noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'sage' ayaa loo adeegsadaa naqshadda muuqaalka, waxay abuuraan qoraalo cajiib ah. Waxaa sidoo kale caan ah daawada dhaqanka iyo karinta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha 2019